DLULA I-Alpes - I-Val d'Aosta FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 826 MB
Play 89 854
Umbhali: Frank Dainese
Great photo-enengqondo nobuhle bendawo of Val d'Aosta Italy, indlela yokwenza kukhona asezingeni esiphawulekayo, umsebenzi Lihle, akungabazeki uyozizwa like emhlabeni wangempela kusuka ukuphakama kancane 15 amamitha. Yini enhle fly uzoba.
Valle d'Aosta kuyinto isifunda ezimele Italy esenyakatho-ntshonalanga, ophinda abe prerogatives wesifundazwe. It sifana esigodini engenhla Dora. Lwekuphatfwa ngalokuyimphumelelo, it is Umncele osenyakatho Canton of Valais (District d'Entremont - Switzerland), entshonalanga des Pays de Savoie (France), eningizimu nasempumalanga ye Piedmont esifundeni.
It uthola igama layo kusukela enhloko-dolobha yalo, Aosta. abahlala khona babizwa ngokuthi "Valle d'Aosta. Le ndawo Valle d'Aosta kuyinto 3 263.25 km2. It is ihlukaniswe yaba eziyisishiyagalombili 'Intaba Imiphakathi" basakaza phezu 74 communes. Ngaleso June 30, 2008, labantu kwaba 126,660 abahlali nge 90,000 French, kwabantu elinabantu 38.8 abantu ngamunye km2.
Imininingwane eyengeziwe ingatholwa "kumenyu yakho yokuqalisa -> Izengezo Rikoooo -> I-Alpes - i-Val d'Aosta FSX & P3D"
Isexwayiso ifayela enkulu 823 MB, Ikona ngokunamandla Kunconywa ukuba asebenzise isofthiwe thwebula namafutha ukuba ume bese kabusha iphuzu yokuboshwa bengenaso lezimanga (isib FlashGet).
Okubalulekile, ukuthi ukusebenzisa indawo? Ungakwazi ukuthatha indiza yakho kusukela sezindiza Aosta (uhlobo Aosta or LIMW)
Ngezansi, indawo yezakhiwo ezingokoqobo ezithathwa yindawo enhle. Ngaphandle kwalokho, ukwenziwa okuzenzakalelayo ku FSX izokhombisa futhi.
Uhlobo lwe-Corsica I FSX & P3D
IHawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D
I-Grand Canyon KGCN V2 FSX & P3D
I-Commonwealth yaseDominica FSX & P3D
IBig Bend National Park Part1 FSX & P3D